Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! कोरोना कहरबीच बेलायतमा उल्लासमय बन्यो नेपाली मेला [तस्बिरहरु]
कोरोना कहरबीच बेलायतमा उल्लासमय बन्यो नेपाली मेला [तस्बिरहरु]
ग्लोबल संवाददाता सोमबार, भदौ १४, २०७८
लन्डन । कोरोना कहरबीच १२ औं संस्करणको नेपाली मेलाको उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।
औपचारिक कार्यक्रम समापनको क्रममा अध्यक्ष हित काजी गुरुङले बेलायत सरकारको नियम पालना गर्दै मेला आयोजना गरेको भन्दै यसमा साथ दिने सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद दिए । अध्यक्ष गुरुङले तमुधिं यूकेको मात्र मेला होइन सबै नेपाली मेला हो भनेर नेपाली दूतावास लन्डनले सहयोग दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफूहरु ऋणी रहेको बताए । पुरस्कार प्रायोजन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई अध्यक्ष गुरुङले धन्यवाद दिएका थिए ।
तमुधिं यूकेका महासचिव परशु गुरुङले सञ्‍चालन गरेको औपचारिक कार्यक्रममा मेला संयोजक एवं उपाध्यक्ष हरि गुरुङले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । औपचारिक कार्यक्रममा बेलायतवासी गीतकार एवं पूर्वप्रधानाध्यापक एकेन्द्र गुरुङद्वारा संकलित, सम्पादित ‘बेलायतमा नेपाली गीत’ पुस्तक विमोचन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, तमुधिंका अध्यक्ष हित काजी गुरुङ, उपाध्यक्ष हरि गुरुङले पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् । सम्पादक गुरुङलाई तमुधिंका अध्यक्ष गुरुङ र राजदूत रेग्मीले खादा लगाएर बधाई दिएका थिए ।
नेपाली मेलाको मुख्य आकर्षण झाँकी, नृत्य प्रस्तुति रहेको थियो । सहभागीहरुको मनोबल बढाउन र अगामी सालमा धेरैभन्दा धेरैको सहभागी गराउन पुरस्कारको राम्रो बन्दबस्त थियो । कार्यक्रमको अन्तमा पुरस्कार वितरण भएको थियो । यसपालीको सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुति देखाएर सिक्लेस पार्चे कम्युनिटी यूकेले प्रथम पुरस्कार १ हजार १ सय पाउन्ड, ऐम्बेसडर कप र एनआरएनए यूके कप हात पार्‍यो । प्रथम पुरस्कारका प्रायोजक गोर्खा मोर्गेजेजका डाईरेक्टर माईकल असर थिए ।
दोस्रो पुरस्कार चार भ्याङज्याङ तमु समाज यूकेले ७ सय पाउन्ड पायो । तेस्रो पुरस्कार किरात यायोक्खा यूकेले ५ सय पाउन्ड पायो । यो उनीहरुको नेपाली मेलामा पहिलो सहभागिता थियो । झाँकीतर्फ सिक्लेस पार्चे कम्युनिटी यूके र चार भ्याङज्याङ तमु समाज यूके क्रमशः प्रथम, द्वितीय भई ५ सय र ३ सय पाउन्ड पाए । नृत्यमा पनि सिक्लेसे टोलीले नै जित्यो । ५ सय पुरस्कार पायो र दोस्रो भई राई यायोक्खाले३ सय पाउन्ड पायो ।
पुरस्कारका प्रयोजकहरु पुरन गिरी ७ सय, थर्क सेन ५ सय, ललितकुमार न्यौपाने ५ सय, क्या. चित्र गुरुङ ३ सय, मिलन गुरुङ ५ सय, एलबीजेड ३ सय थिए । र, राफल ड्र का लागि श्री लक्की ज्वेलर्स अल्डरसटबाट १ तोला सुन, ईमान गुरुङ आईप्याड र डिलरास गुरुङ १ सय पाउन्ड प्राप्त भएको थियो ।
मेलाका लागि आर्थिक सहयोग गर्नेहरुमा योगेन क्षेत्री १ हजार, मेजर कुमार गुरुङ (एमभीओ) १ हजार र कमल पौडेल ५ सय पाउन्ड थिए ।
कार्यक्रमलाई पूर्णाता दिनुमा तमुधिं यूकेका आमा समूहको उल्लेखनीय भूमिका देखिन्थ्यो। कार्यक्रम स्थलमा बिहान सबैरेदेखि उपस्थित रहेर दिनैभरि पाहुना सत्कार र च्यारिटीका लागि कपडा बेच्न पनि भ्याए । 'कपडा बेचेर ७ सय पाउन्ड जम्मा भएकोछ । यो हामीले नेपालमा च्यारिटीका लागि पठाउँनेछौं', आमा समूहका महासचिव यशोदा गुरुङले गोर्खा मिडियालाई बताइन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १४, २०७८, ०८:३३:००